Tag: kusiiwa | Martech Zone
Maitiro Ekuyera, Kunzvenga, uye Kuderedza Yakakwira Shopping Cart Kurega Mitengo
China, Gumiguru 22, 2020 China, Gumiguru 22, 2020 Douglas Karr
Ini ndinogara ndichishamisika pandinosangana nemutengi neinternet Checkout maitiro uye vashoma vavo vakaedza chaizvo kutenga kubva kune yavo saiti! Mumwe wevatengi vedu vatsva anga ane saiti yavakaisa toni yemari mairi uye matanho mashanu ekubva papeji rekutanga kuenda kungoro yekutengera. Chishamiso kuti chero munhu arikuzviita kusvika ipapo! Chii chinonzi Shopping Cart Abandonment? Zvingadaro
Chishanu, May 6, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Hapana mubvunzo kugadzira uye kuitisa inoshanda ngoro yekutengera kusiira email mushandirapamwe unoshanda. Muchokwadi, anodarika gumi muzana emaimass ekusiya maemail akavhurwa, anodzvanywa. Uye avhareji kukosha kukosha kwekutenga kuburikidza nengoro yekusiya maemail iri 10% yakakwira kupfuura zvakajairwa kutenga. Iwe haugone kuyera zvakati wandei kupfuura mushanyi kune yako saiti kuwedzera chinhu kune yako yekutengera ngoro! Sevashambadziri, hapana chimwe chinhu chinorwadza pamoyo pane kutanga waona kupinda kukuru
Chii Chinonzi Kushambadzira Kushandisa? Zvaunoda Kuziva…
Svondo, Kubvumbi 3, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kushambadzira otomatiki izita buzzword inoita kunge iri kushandiswa kune zvese mazuva ano. Kana puratifomu yesoftware inogona kukonzeresa meseji kune vanogamuchira kuburikidza neAPI yavo, inosimudzirwa sekushambadzira otomatiki. Mune maonero angu, izvi zvinongova kusatendeseka. Kunyangwe ichi chingave chiitiko chakazvimiririra chinoenderana nezano ravo rekushambadzira, haisiyo yekushambadzira otomatiki mhinduro. Muchokwadi, ndinotenda ruzhinji rwekushambadzira otomatiki mhinduro dziripo - kunyangwe hombe - dzine
Basa reData muNzira yePamhepo yekutenga
China, June 5, 2014 Douglas Karr
Kune akawanda mapoinzi munzira yekutenga uko vatengesi vanogona kuunganidza nekushandisa data kusimudzira ruzivo rwekutenga uye kushandura mabhurawuza kuva vatengi. Asi pane yakawanda data zvekuti zvinogona kuve nyore kutarisisa pane zvisizvo zvinhu uye vobva vasiya nzira. Semuenzaniso, 21% yevatengi vanosiya ngoro yavo nekuda kwekuti maitiro ekubuda haana kukwana. Iyo nzira yekutenga ine akawanda mapoinzi apo vatengesi vanogona kutora
Bounce Exchange: Chii Chinobuda Chinangwa?
Chishanu, February 7, 2014 Chitatu, Kukadzi 24, 2016 Douglas Karr
Iwe unogona kunge waona pane yedu blog kuti kana mbeva yako ikasuduruka kubva papeji uye kuenda kukero bar (uye iwe hauna kunyorera), kuti panyorerwo pani inowoneka. Inoshanda zvine hungwaru… uye isu takawedzera edu ekuedza kuedza kwevanyoreri kubva gumi kusvika kumazana mwedzi wega wega. Izvi zvinozivikanwa sekuda kubuda. Bounce Exchange ine patent tekinoroji yekubuda-Intent tekinoroji iyo inocherekedza kuita kwembeva, kumhanya kwembeva, nzvimbo yegonzo, uye
Zvikonzero Nei Vanhu Vachirega Ngoro dzekutenga
Muvhuro, Nyamavhuvhu 6, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Iwe hausi kuzowana 100% yekutengesa mushure mekunge mumwe munhu awedzera chigadzirwa kuchitoro chako chekutenga, asi hapana mubvunzo kuti igap iyo mari inowanikwa. Pane nzira dzekukwevera vanhu kudzoka mu… kumisazve kumwe ndeimwe yacho. Mishandirapamwe yekumisikidza inotevera vanhu mushure mekunge vasiya ngoro yekutengera uye kushambadzira zvakare kwavari pavanenge vachishanyira mamwe masaiti. Kudzoka kwacho kwakajairika pamushandirapamwe wekutaurisa. Nekudaro, ndizvozvo mushure mekunge vaita